Raw Tadalafil poda (171596-29-5) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
SKU: 171596-29-5 Category: Sex Hormone
Tadalafil poda vhidhiyo
Kemikari Name (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
muchiso Name Cialis, Adcirca
Kirasi yeMishonga PAH, PDE-5 Inhibitors; Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitors
Molecular Wsere 389.4
Kunyorera Point 298-300 ° C
Freezing Point 2 ° C
Biological Half-Life 17.5 maawa
ruvara Yakachena Kuti Irege Kuvhara Cyrstalline Yakasimba
Skukodzera Inogadziriswa muDMSO (78 mg / ml pa 25 ° C), methanol, mvura (<1 mg / ml pa 25 ° C), dichloromethane, uye ethanol (<1 mg / ml pa 25 ° C)
Storage Temperature Chengetedza mukati mekushisa kwemukati pakati pe59 ° F uye 86 ° F (15 ° C uye 30 ° C). Usachengetedze iyi mishonga munzvimbo dzine mvura kana dzisina mvura.
Tadalafil APane Raw Tadalafil mapfufura, Kuita zvepabonde, Kofi yepabonde, nezvimwewo.
Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6] pyrido [3,4-ind] Cialis), iri mhando yePDE1,4 inhibitor uye mushonga unoripirwa nemuromo. Iyo b-carboline yakatorwa uye yakarongedzwa zvakasiyana kubva kune vardenafil (Levitraw) uye sildenafil (Viagraw), ese ari PDE5 inhibitors akavakirwa pane yakaomeswa pyrimidine musimboti. Tadalafil poda (CAS 5-171596-29) inowedzera kuyerera kweropa mukati me corpus cavernosum nekuzorodza masumbu emidzi yeropa, uye izvi zvinoita kuti murume akwanise kuwana erection. Tadalafil poda yakatenderwa neUnited States (US) Chikafu uye Drug Administration (FDA) mu5 kurapwa kwekuputika (ED), uye inotengeswa pasi rese pasi pezita rechiratidzo Cialis. Izvo zvinoshandiswawo kurapa pulmonary arterial hypertension uye benign Prostatic hyperplasia, mamiriro ezvinhu umo prostate gland inokura, ichikonzera matambudziko nekuromba.
Tadalafil's kusiyanisa chemacologic chimiro ndeyehurefu hwayo hwehafu-hupenyu (maawa 17.5) uchienzaniswa neViagra uye Levitra (maawa 4-5). Hurefu uhwu hwehupenyu hunoguma nekureba kwenguva yekuita uye, mune chimwe chikamu, ine chekuita neCialis zita re "piritsi revhiki." Hupenyu hurefu uhwu zvakare ndiyo hwaro hwekuferefeta kwazvino kwekushandiswa kwe tadalafil mune chepamhepo arterial hypertension se kurapa kamwe-zuva nezuva.
Penile erection panguva yekusimudzira kwepabonde inowanikwa nekuzorora kweiyo penile artery uye corpus cavernosal zvinyoro nyoro, zvichitungamira kuwedzera kweropa kuye kuchiitiko. Iyi zororo inobvumira kuwedzera kweropa kuyerera kuburikidza neye penile artery, uku ropa iri richizadza makamuri maviri mukati penisheni inonzi Corpora cavernosa. Sezvo makamuri anozadza neropa, penis inokura yakaoma. Kugadziriswa kunopera kana tsandanyama dzikabvumirana uye neropa rakawunganidzwa rinogona kubuda nepenains.
Mhinduro iyi inosvikirwa nekuburitswa kwe nitric oxide (NO) kubva kumitsetse yemitsipa uye masero endothelial, ayo anomutsa iwo maitiro eiyoCGMP mumasero akagadzikana emhasuru uye obva atonga kudzikiswa uye kukanganiswa kwemidziyo yeropa inotakura ropa kuenda nekubva penis. Cyclic GMP inokonzeresa kuzorora kwetsandanyama uye kuwedzera kweropa kuyerera mukati me corpus cavernosum, uye inosvibiswa neiyo cGMP chaiyo phosphodiesterase mhando 5 (PDE5) mu Corpus cavernosum iri munharaunda yakapoteredza penis. Tadalafil inhibits PDE5 uye nekudaro inowedzera nekuwedzera huwandu hwecGMP inowanikwa. Tadalafil inomisa PDE5 kubva pakuparadza cGMP uyezve inowedzera iyo inowanikwa cGMP kuita basa uye inoita kuti erection iite kwenguva refu.
Nekudaro, sezvo hafu-yehupenyu hweTadalafil iri pfupi, mhedzisiro yayo inopera mukufamba kwemazuva e2 ichiita kuti PDE5 idzoke uye hutano hwako hwepabonde - ita zvakanyanya. Ungangoda kutora nguva yakareba kuti uwane kuita kwaunoda, senge yakaderera-simba Cialis 4-5 mazuva e4-5 mazuva.
Norepinephrine inotora blocker
Yakakurudzirwa Tadalafil poda Dosi
Cialis inouya apera, firimu-rakabikwa uye almond-akavezwa mahwendefa mu5, 10 uye 20 milligram (mg) doses. Iyi yekurudziro yekutanga dhaiti yeCialis poda yekushandiswa sezvinodiwa mune varwere vazhinji ndeye 10 mg, yakatorwa isati yambofungidzirwa nezvepabonde.
Door yekutanga ndeye 10 mamirigiramu (mg) kanenge maminetsi e30 pamberi pebonde. Door yacho inogona kuwedzera kune 20 mg kana kuderera kusvika ku5 mg, zvichibva pane zvinobudirira uye zvinoshivirira. Asi, iyo yakakwira ndeye 20 mg seyero imwe. Iyo yepamusoro yakakurudzirwa dosing frequency kamwe kamwe pazuva mune varwere vazhinji. iyo haifanire kutora isingasviki imwechete muzana mune maawa e24. Varwere vanotarisira kuita zvepabonde kanenge kaviri pasvondo vanogona kutora dhigidhi yezuva nezuva ye5 mg, uye izvi zvinogona kuderedzwa kusvika ku2.5 mg kamwechete zuva nezuva, zvichienderana nemafungiro emunhu.
Cialis poda yekushandiswa sezvinodiwa yakaratidzwa kuvandudza basa uchienzaniswa ne placebo kusvika kumaawa e36 achitevera dosing. Naizvozvo, kana uchipa varwere pakushandiswa kwakakwana kweCialis poda, izvi zvinofanirwa kutorwa mukufungwa.
Zvakakosha kuziva kuti erection haizoitika nekungotora piritsi. Uye usatore Cialis yekusagadzikana kana iwe uri kutora Adcirca yezvirwere zvepfungwa. Beside, Tadalafil yekusagadzika ndeyekungoshandiswa chete nevakuru vane makore 18 makore uye pamusoro.
♦ Tadalafil poda inogona kubatsira kuzorodza mhasuru mune yako yeprostate uye bhachi. Izvi zvinogona kubatsira kuvandudza ako BPH zviratidzo.
♦ Kuvandudza zviratidzo zveEU, tadalafil poda inobatsira kuwedzera kuyerera kweropa kune penis. Izvi zvinogona kubatsira kuti iwe uwane uye uchengete erection. Kuti tadalafil poda ikubatsire iwe kuti uite erection, iwe unofanirwa kumutswa pabonde.
♦ Ye PAH, tadalafil poda inoshanda kuvandudza kugona kwako kurovedza muviri nekuzorodza mitsipa yeropa mumapapu ako. Izvi zvinowedzera kuyerera kweropa.
Pamwe pamwe nemhedzisiro yayo inodikanwa, mushonga unogona kukonzera mimwe miganho isingadiwe. Kunyangwe zvisiri zvese izvi zvinokanganisa zvingaitika, kana zvikaitika vangangoda kurapwa. Ndokumbira utarise miganho inotevera ye tadalafil powder:
▪ kugumburwa mudumbu
▪ kurwadziwa shure
▪ musungo aches
▪ kuputika (ruvara rutsvuku)
▪ yakakosha kana yemhino yemhino
Hashoma asi zvakakomba mhedzisiro
Kuwedzeredzwa kwenguva refu kunogona kukonzera kukuvadzwa kwepenisi, matambudziko ekuona, uye kurasikirwa kwekunzwa.
Kana izvi zvikanyoro, vanogona kuenda mukati memazuva mashoma kana masvondo mashoma. Kana vakanyanya kuoma kana kuti vasati vaenda, taurai nachiremba wako kana wemishonga.
Vanhu vane mamiriro anotevera haafanire kutora Cialis poda kunze kwekunge chiremba abvuma:
▲Matambudziko erumbo rwemoyo, angina, kana chero rudzi rwechirwere chemoyo
▲Yakakwira kana yakaderera ropa
▲Congestive mwoyo kukundikana kana kurohwa mukati memwedzi yekupedzisira ye6, kana myocardial infarction mukati memwedzi yekupedzisira ye3
▲Sickle cell anemia, akawanda myeloma, hemophilia, leukemia, kana rimwe dambudziko reropa
▲Chiropa kana chirwere chetsvo
▲Kugadzika kwechimiro che penis, sechirwere che Peyronie
▲Chero hutano hwehutano hwavakarairwa kuti varege kuita zvepabonde
Paunoshandisa tadalafil, panogona kunge paine zvimwe zvinodhaka zvinogona kukanganisa mushonga, zvinogona kutungamira Kubatana kwezvinodhaka kunogona kuchinja mashandisiro ako mishonga kana kuwedzera njodzi yako yemhedzisiro yakaipa.
Tadalafil ine ine mwero synergistic mhedzisiro pane yakaderedzwa-nitrate-inoderedza muropa. Tadalafil inogona kukonzera kudonha kwakakomba muropa rako kana ikashandiswa nema nitrate, izvo zvinogona kutungamira kuzunguzika, kukomoka, uye kashoma kurohwa nemoyo kana kurohwa. Usashandise tadalafil nechero ipi inotevera: mimwe mishonga inoshandiswa kurapa chest pain / angina (nitrate senge nitroglycerin, isosorbide), zvinodhaka zvinodhaka zvinonzi "poppers" zvine amyl kana butyl nitrite.
Kana iwe uri kutorawo chirongwa cheal alpha blocker (zvakadai se doxazosin, tamsulosin) kuti uite prostate yakawedzerwa / BPH kana kukwirira kweropa, ropa rako rinogona kuderera zvikuru izvo zvinogona kutungamirira kuzinza kana kupera. Chiremba wako angatanga kurapwa nechirwere chepasi che tadalafil kana kuti shandura mishonga yako alpha blocker kuti uderedze njodzi yako yekuderera ropa.
Mune zvidzidzo zvekiriniki, kukosha kwakakura kwemhinduro kwakataurwa kusvika ku36 h ichitevera kupinza mushonga. Tadalafil inonyanya kuvezwa pamuropa neCYP3A4 kune zvimiro zvisiri kushanda zvinopesana nePDE5 uye zvinowedzerwa zvakanyanya sema metabolites mumarara uye urini. Iyo pharmacokinetics ye tadalafil haina kukanganiswa nezvinhu zvakadai sekudya uye doro, zera, kuvapo kwechirwere cheshuga, uye hunyoro kana zvine mwero hepatic kushomeka. Zviitiko zvinowanzoitika zvinokonzerwa nemishonga ndezve musoro, kurwadziwa shure, dyspepsia, uye myalgia. Pa 10 uye 20 mg doses, Tadalafil haina mhedzisiro yakakosha pakumanikidzwa kweropa uye nemoyo wemoyo uye haina kukonzera kuwanda kwezviitiko zve myocardial infarction. Mishumo isingawanzo yerections refu kupfuura 4 h uye priapism yakacherechedzwa nekushandiswa kwe tadalafil. Kufungidzira, kana ikasabatwa nemazvo, kunogona kukonzera kukuvadzwa kusati kwashandurwa nehutu. Varwere vane erection inogara yakakura kupfuura 4 h inorayirwa kutsvaga kukurumidza kurapwa. Mune varwere vane chirwere cheshuga, kugadzirisa kwebasa ne tadalafil hakuna mhaka yemhando yeshuga uye rudzi rwechirwere cheshuga.
Mamwe mishonga inogona kukanganisa kubviswa kwe tadalafil kubva mumuviri wako, izvo zvingakanganisa kuti tadalafil inoshanda sei. Mienzaniso inosanganisira azole antifungals (akadai itraconazole, ketoconazole), macrolide mishonga (yakadai clarithromycin, erythromycin), HIV runovharidzira mamwe FIs (akadai fosamprenavir, ritonavir), hepatitis C utachiona runovharidzira mamwe FIs (akadai boceprevir, telaprevir), rifampin nevamwewo .
Usatore mushonga uyu nechimwe chigadzirwa chine tadalafil kana mimwe mishonga yakafanana inoshandiswa kurapa dysfunction-ED kana pulmonary hypertension (yakadai sildenafil, vardenafil).
Nezve tadalafil kudyidzana nemamwe madhiragi kuchine zvakawanda, kana iwe uchida kushandisa mushonga ne tadalafil powder (CAS 171596-29-5), tanga kurangarira kuonana nachiremba wako uye iye achakupa zano rechokwadi uye rakavimbika.
Kuwedzera mamwe mashoko
Tadalafil poda, sildenafil poda, uye vardenafil poda vese vanoita nekuvhara PDE5 enzyme, asi zvinodhaka izvi zvakare zvinokanganisa PDE enzyme 6, 1, uye 11 mumadhigiri akasiyana. Semuenzaniso, Sildenafil uye vardenafil inhibit PDE6, enzyme inowanikwa muziso, kupfuura tadalafil. Vamwe vashandisi sildenafil vanoona bhururu tinge uye vane yakakwirira yekunzwa kubhenekera nekuda kwePDE6 inhibition. Kunze kwezvo, Sildenafil uye vardenafil zvakare inhibit PDE1 kupfuura tadalafil. PDE1 inowanikwa muuropi, moyo, uye bvudzi rakatsvuka tsandanyama. Iyo inofungidzirwa kuti iyo inhibition yePDE1 na sildenafil uye vardenafil inotungamira kune vasodilation, kufuratira, uye tachycardia.
Kuenzaniswa nekuita muPDE6 uye PDE1, tadalafil yakawedzera mukurumbira paPDE11. PDE11 inoratidzwa mumabhonzo emabhonzo, Prostate, chiropa, itsvo, chirwere chepituini, uye testes. Nekudaro, mhedzisiro pamuviri wekutadzisa PDE11 haizivikanwe.
1.National Center For Biotechnology Information, US. National Library Of Medicine, Tadalafil, Pubchem Zvikamu 1-10.
2.Evelyn C. Cortez, CIALIS (Tadalafil): Mashandiro, Nhamba, Maitiro Akashata Mashoko uye Zvokutenga Generic Cialis (Tadalafil), Viagra (Sildenafil), uye Zvimwe Zvinotapira Mishonga Dzakasvibiswa uye Zvakachengeteka Online, Zvakabudiswa, 13 Dec 2017, peji 5-3
3.James Lee Anderson, Cialis, Tadalafil: Anoita Erectile Dysfunction, Zviratidzo zveBenign Prostatic Hyperplasia, uye Pulmonary Arterial Hypertension, CreateSpace Independent Publishing Platform, 26 Mar 2015, peji 5-47.
Dutasteride powder imishonga inonyanya kushandiswa kurapa zviratidzo zve prostate yakawedzerwa. Pane hormone ......